Mmanụ dị mkpa iji chebe - mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
Mmanụ dị mkpa maka nchebe
Ihe na June 6, 2020 June 6, 2020 by Matt
Na post a, anyị na-ahọrọ nri ngwakọta a na-esi ísì ụtọ maka gị mmanụ ndị dị mkpa dị mkpa ejiri na-eme ihe maka nkwado, nchebe na nchebe.
Ngwakọta dị mkpa nke mmanụ mmanụ na nutmeg base
Mpempe 9 nke Nutmeg
Iri itoolu 9 nke Osisi Tea
6 tụlee lemon mmanụ dị mkpa (mmanụ 5 dị mmanụ oroma dị ụtọ)
6 tụlee nke myrtle
3 tụlee nke fir
Wunye mmanu ndị a dị mkpa n’ime karama amba 5 amber, gwakọta ha nke ọma na ịma jijiji.
Mmanụ dị mkpa gwakọtara na mmanụ a honeyụ
6 mmiri mmanụ a .ụ
5 tụlee mmanụ osisi mmanụ dị mkpa
5 tụlee nke lavender mmanụ dị mkpa
3 tụlee nke thyme
2 akwukwo mmiri nke bayure laurel
Mpepu abụọ nke Cypress
Tụfuo mmanụ ndị a dị mkpa na oke ahụ ekwuru na ha n'ime karama amba 5 ml, wee kpoo ha nke ọma.
Anyị nwere ike tinye ngwakọta abụọ a n'ụzọ dị iche iche na ndụ anyị kwa ụbọchị.
Ha dị ebube maka ihicha aka, ikuku dị n’ime ụlọ, ihe, akwa, wdg.
Ma n'otu oge ahụ, ha na-enwe mmetụta dị mma na sistemụ limbic anyị site na ntinye, ike, na ume.
mmanụ dị mkpa maka nchebe ime mmụọ
Yabụ, otu esi eji mmanụ dị mkpa maka nchebe?
Ndị a bụ ụzọ ole na ole enwere ike:
- Tupu ịmalite ibido njem gị, tinye obere ngwakọta mmanụ dị mkpa na ịchafụ ma ọ bụ anụ ahụ n'okpuru imi.
- Tinye mmanu 3-5 nke ngwakọta mmanụ dị mkpa (dabere na nha ụlọ ahụ) na mkpa mmanụ diffuser ma obu onye nebulizer. Jiri ya sachaa ikuku dị n’ime ụlọ ọtụtụ oge n’izu maka ihe dị ka. Nkeji 30 dị na nke ọ bụla.
Post post: ole otu mmanụ dị mkpa ka m ga-etinye n’ime onye na-enye m nsogbu?
Jiri aka aka fụchie gị mgbe ị na-aga
30 ml lemon balm hydrolate / lemon balm mmiri
20 ml nke 96% mmanya na
12-15 ntinye nke ngwakọta mmanụ dị mkpa nke anyị ketara maka gị.
Wụsịnụ ihe ndị ahụ n’ime karama pọmulu mmiri dị milimita 50, jiri isi fesaa ha.
Olee otú Jiri: Tinye nza na aka gi ma ghee ya nke oma. Ikwanye ọkpọ ịgba ahụ nke ọma tupu ojiji ọ bụla.
Mgbakwunye - Nkeji: A nwekwara ike iji fesaa ahụ mee ihe dịka fesaa ụlọ. Maka iji ọzọ, anyị nwere ike itinye ya maka ohiri isi na matraasi na-esi ísì.
Ọ bụrụ na ị nwere aka na - akwọ nkụ, ịnwere ike ịgbakwunye 5 ml nke almọnd mmanụ na ntinye aka.
AromaEasy 2020 mmanụ dị mkpa Starter kit K004-Wholesale Banner
With mee ka mmanu di nkpa ike n’okporo uzo ikuku gi
Jiri ikuku a mee ka ikuku dị ọcha
Anyị na-ekerịta nri ngwakọta mmanụ abụọ dị mkpa maka ume ọhụrụ na ume, na-enyere ndị mmadụ aka na nsogbu iku ume.
LSI: mmanụ dị mkpa maka iku ume karịa
Iku ume - free freshful na ngwakọta
5 tụlee nke fir
4 tụlee mmanụ osisi mmanụ dị mkpa
Mpekere 4 nke ose ojii
3 mkpụrụ osisi cedarwood
2 ghaa mkpụkpu
Wunye ihe ndị a niile n'ime obere ite ma jikọta ngwakọta ahụ nke ọma.
Inyere gị aka na ume dị omimi - mmanu mmanu na mmanu di nkpa
Mpempe 6 nke Cypress (ịnwere ike iji Black spruce dị ka ihe ọzọ)
3 tụlee nke paini
Mpepu abụọ nke Cedarwood
2 tụlee nke lavender mmanụ dị mkpa
1 dobe nke rose mkpa mmanụ
Gwakọta mmanụ ndị a dị mkpa na vial ma ghee ha nke ọma.
Otu esi etinye ngwakọta maka usoro iku ume:
- Wunye ngwakọta mmanụ dị mkpa na ịchafụ, ma ọ bụ mkpuchi aka n'okpuru imi.
- Tinye 2-3 tụlee nke ngwakọta ahụ n'ime ihe dị mkpa mmanụ na - esi ísì ma kpoo ụlọ ahụ.
Ma inwere ike iji nke aromatherapy ugboro 2 n’ụbọchị maka odika. Nkeji 30.
- Mkpa mmanụ ngwakọta mpịakọta-na, n'ihi na ọ na-aga:
Wunye mmanu 12 di mmanu di mmanu n’ime karama afere 10 ml, wee were mmanu jojoba juju karama ahu.
Kechie wrist na ngwakọta ị mere dịka ịchọrọ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ, ịnwere ike itinye ísì gị n’akpụkpọ aka gị ugboro 2-3. Nwekwara ike itinye ngwakọta mmanụ a dị mkpa maka iwepụ mgbu azụ.
Iji mee ka mgbu ụkwụ belata: Jiri akwa chara acha tinye mmanụ dị gị n'ụkwụ tupu ị lakpuo ụra. Ntị: ihe egwu nke ịmịcha! Anyị ga-akwado gị ka itinye akwa sọks na ngwa ka ngwa gachara.
Osisi Ndị Dị Mkpa Maka Lovehụnanya